ओलीले बिचैमा छोडेर हिडेको नेकपा हाइकमाण्ड बैठक सकियो, के-के भए निर्णय ? — Imandarmedia.com
ओलीले बिचैमा छोडेर हिडेको नेकपा हाइकमाण्ड बैठक सकियो, के-के भए निर्णय ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । चर्काचर्की चलेपछि बालुवाटारमा अपरान्ह बसेको बैठकबाट पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली हिडेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो ।
भोलिलाई डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न आज सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । सरकारले जारी गरेर फिर्ता गरेको दुई अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्र विवाद बढेको छ । अघिल्लो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिएपछि उनले कोरोनापछि उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, अर्का अध्यक्ष र बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष भने ओलीले अहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने वा एक व्यक्ति एक पदको नीतिमा पार्टी जानुपर्ने पक्षमा छन् । यसकै बिषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट बाहिरिएको स्रोतले दावी गरेको छ । यता सचिवालयको बैठक बिनानिर्णय टुंगिएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अहिले छलफल भइरहेको छ।
दुई अध्यक्षबीच भोलिका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक गर्ने/नगर्ने, बैठक बस्यो भने के प्रस्ताव पेस गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसअघि बैठकको बीचमै प्रधानमन्त्री ओली म थाकें भन्दै बैठकबाट उठेर गएका थिए। प्रधानमन्त्री बैठकमा नफर्किएपछि बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको थियो।
बैठक सकिएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावबारे दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको बताए। उनले भोलि स्थायी समिति बैठक बस्ने/नबस्नेबारे पनि दुई अध्यक्षले निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए।
‘स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने प्रस्तावबारे दुई अध्यक्षहरूबीच अझै पनि गृहकार्य गर्न बाँकी रहेको बैठकलाई जानकारी गराइयो। दुई अध्यक्षले सल्लाह गरेर बैठकका कार्यसूची वा बैठक नै के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने। भोलि बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावलगायत अन्य विषय छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो।
वैशाख १७ गतेको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले २० गतेको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रस्तावबारे केही पनि उल्लेख नगरेपछि पछिल्ला दिनमा गौतम पनि आफ्नो हुर्मत लिएको भन्दै रूष्ट बनेका उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन्। बुधबार बिहानमात्र गौतम प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका थिए। उनले आजै अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरेको स्रोतको दाबी छ।